Golaha Ammaanka QM oo ku baaqay in deg-deg loo qabto doorashada Soomaaliya | Allbalcad Online
Home WARARKA Golaha Ammaanka QM oo ku baaqay in deg-deg loo qabto doorashada Soomaaliya
Golaha Ammaanka QM oo ku baaqay in deg-deg loo qabto doorashada Soomaaliya
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqay madaxda Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Dowlad-goboleedyada in ay ugu horayn shiraan si loo xaliyo khilaafka ka jira doorashooyinka.
War saxaafadeed ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in laga dhagaystay ergeyga gaarka ah ee Q.M. u fadhiya Soomaaliya Amb James Swan in ay muhiim tahay in doorasho loo dhanyahay ka dhacdo Soomaaliya “sida ugu dhakhsaha badan” taasna ay dan ugu jirto dhamaan soomaalida.
Golaha amaanka ayaa ugu yeeray dhinacyada in ay xalliyaan arrimaha taagan iyadoo lagu saleynayo heshiis ay gaareen 17 Sebtember 2020.
Tani waa baaqii labaad ee bishaan ay soo gudbiso hay’ada ugu awooda badan Q.M. ee ku aadan wax ka qabashada khilaafka hareeyay doorashooyinka Soomaaliya.
12-kii Maarso, goluhu wuxuu ku booriyay dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada “in ay qabtaan doorashooyin xor ah, caddaalad ah, lagu kalsoonaan karo oo loo wada dhan yahay” iyadoo la raacayo heshiiskii Sebtember “dib u dhac la’aan.”
Goluhu wuxuu Arbacadii “ku celiyey sida uu ugu xunyahay weerarada argagixiso ee ay geysanayaan Al-Shabaab waxayna xaqiijiyeen in ay taageerayaan madaxbanaanida qaranka, midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya.”
Xubnaha golaha ayaa sidoo kale amaanay doorka midowga afrika ee “kor u qaadida wadahadalada dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.”
Danjiraha Ingiriiska Barbara Woodward, oo ku baaqday kulanka deg dega ah ee laga yeeshay xaaladda Soomaaliya, ayaa sheegtay in Swan uu la wadaagay golaha in hannaanka doorashada Soomaaliya ay u baahan tahay “feejignaan deg deg ah iyo taxadar dheeraad ah.”
Waxa uu yiri goluhu wuxuu aad u soo dhaweynayaa dadaalka Swan “isku soo dhaweynta xisbiyada iyo in lagu dhaqaaqo doorashooyinka sida ugu dhaqsaha badan, laakiin aan dhib gaysan.”
Ka dib burburkii 1991, markii ay hoggaamiye kooxeedyadu xukunka ka tuureen Dowladii Milatariga Soomaaliya waxa ay wajahday Sannado oo colaado, dagaalo iyo macluul ah mana jirto ilaa hada hay’ado sal adag oo ay yeelatay Dowladnimada Soomaaliya oo 20 sano ee la soo dhaafay samaysay xoogaa hormar ah.
Dagaalyanada Al-Shabab ayaa laga saaray magaalada caasimada ah ee Muqdisho sanadkii 2011, waxaa sidoo kala laga qabsaday magaalooyin kale oo muhiim ah laakiin wali waxa ay maamulaan qaybo badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxayna inta badan caasimada ka gaystaan weeraro toos ah iyo qaraxyo ismiidaamin ah.
Previous articleMadaxweynaha Cusub ee Niger oo ka badbaaday afgembi
Next articleTaliyaha Ciidanka Xoogga dalka Gen’ Odowaa oo la kulmay taliyaha Howlgalka Midowga Yurub